I-CUSRTOM YOKUGQIBELA IBALALI NABASEBENZI | Indawo
Ikhaya > Iimveliso > Ibhegi epholileyo
1. Ingxowa yethu yophololongile inomgangatho wokupholisa: umgangatho wokufakelwa okusemgangathweni kwi-3 eyahlukileyo isebenza kunye ukugcina ukutya kunye neziselo zakho zipholile ukuya kwiintsuku ezi-3. Umaleko wangaphandle unemigangatho yobungqina bamanzi ethi iqinisekisile ukuba akukho funga, umaleko ophakathi ngu-fight offint umxokelelwane kwaye i-Inter ifakwe ngokupheleleyo kwimibandela yokuvuselela
I-2.100% ivuza uphahla kunye nokunganyangeki kwempembelelo: I-Coughler ethambileyo ibonisa iqokobhe elinamanzi kunye ne-tought iqhekeza ukuxhathisa amanqe kunye ne-UV Rys. I-airtight i-zipper i-Tab elula i-Tab igcina ibhegi enomtsalane
3. I-BPA ingasimahla yengxowa esemgangathweni ephezulu: i-liner yeendlela ezipholileyo ezithambileyo ezenziwe kwi-BPA yasimahla, umgangatho ophezulu, ixabiso lokhuphiswano. I-gear egqibeleleyo yegiya ye-piars, i-picnics ye-picnics, ipaki, umsila, intaba, inkampu, inkampu okanye ukusetyenziswa kwenkampu
4. Iindlela zokuthwala: Ngombala ophazamisekileyo onokutsha kwi-PAD, iiSandi eziPhezulu kunye ne-2 yoqondakalisa i-Gab-N-Hais, ungayithwala igxala-mali enamagxa, okanye usebenzise ngaphezulu Izibambo zokuPhatha kakhulu.
5. I-hopper'Ilaphu eliphezulu lendwangu lingasebenziyo kwaye lixhathise i-therildew, ukuxhwilwa, kunye nee-UV. I-fin-raber yerabha evaliweyo ibonelela ngokubandayo kakhulu kubaninzi beepholethi ezithambileyo. Eyona nto ibaluleke kakhulu, enamandla aphezulu kunye ne-leak boubler iprider ehlabathini emhlabeni.
Ukuba ufuna iibhegi ezibandayo zeSiko, nceda unxibelelane nathi.